Misokatra any Barcelona ny tranom-bakoka Modern Modern Contemporary (Moco)
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Misokatra any Barcelona ny tranom-bakoka Modern Modern Contemporary (Moco)
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Moco Museum dia naka ny toeran'ny Palacio Cervelló, trano nipetrahan'ny fianakavian'i Cervelló mendri-kaja hatramin'ny taonjato faha-18.
Ny Museum Modern Contemporary (Moco) dia mamerina ny maodelin'ny tranombakoka ao Barcelona, ​​Espana.
Taorian'ny fahombiazany tao Amsterdam, Moco dia nanako ny fahavononany hampiranty ireo sangan'asa mampiavaka ireo mpanakanto fanta-daza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo kintana miposaka.
Moco Museum dia hanokatra ny varavarany amin'ny 16 Oktobra 2021 ao anatin'ny 16th taonjato Palace ao afovoan-tanàna.
The Tranombakoka ankehitriny (Moco) maoderina mamerina ny maodelin'ny tranombakoka ao Barcelona, ​​Espana. Amin'ny 16 Oktobra 2021, Moco Museum Barcelona dia manokatra ny varavarany ho an'ny besinimaro, manamarika toko vaovao ho an'ny tranombakoka tsy miankina.
Zavakanto maoderina sy ankehitriny
Taorian'ny fahombiazany tamin'ny Amsterdam, Moco dia manako ny fahavononany hampiranty ireo sangan'asa malaza ataon'ireo mpanakanto malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo kintana mihamisondrotra. Moco Amsterdam nanokatra ny vavahady voalohany tamin'ny volana aprily 2016. Androany, Moco Museum Amsterdam dia nandray mpitsidika efa ho 2 tapitrisa avy amin'ny firenena 120 samy hafa. Ho an'ny mpitsidika marobe, Moco dia fidirana amin'ny tontolon'ny zavakanto. Faly izahay mandray ireo mpihaino marobe mitsidika anay ary mifankatia amin'ny kanto voalohany.
Moco Barcelona manana asa-tanana avy amin'i Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, & Bebe kokoa! Zavakanto immersive amin'ny traikefa nomerika avy amin'ny teamLab, Les Fantômes, ary Studio Irma.
Esplendor de la Noche by Guillermo Lorca: Moco dia manolotra ny seho solo eropeana voalohany avy amin'ny mpanakanto Shiliana ankehitriny amin'ny fampisehoana iray izay mampifangaro ny majia sy ny realisme. Notarihin'i Simon de Pury, mpivarotra varotra malaza, mpivarotra zavakanto ary iray amin'ireo olo-malaza eo amin'ny tontolon'ny zavakanto.
TeamLab: Art immersive nomerika
Ny toerana fampirantiana natokana voalohany an'i Eoropa tamin'ny tranga NFT.
Any amin'ny c / Montcada 25 any Barcelona. Moco Museum dia naka ny toeran'ny Palacio Cervelló, trano nipetrahan'ny fianakavian'i Cervelló mendri-kaja hatramin'ny taonjato faha-18. Manomboka amin'ny Moyen-Orient ka hatramin'ny 20th Taonjato maro, aristocrats, mpivarotra ary Royal no nitazona an'ity tranonkala manan-tantara ity. Amin'ny fanajana fatratra ny trano efa misy, Studio Pulsen dia namerina ny votoatin'ny Palacio Cervelló tany am-boalohany - nifanaraka tamin'ny filan'ny Museum Moco hamoronana toerana maoderina sy ankehitriny.
Ity fitrandrahana habakabaka ity dia taratry ny fandraisana andraikitra voalohany nataon'i Moco, rehefa naka ny toeran'ny Villa Alsberg (b. 1904) tao Amsterdam - tranobe natokana ho an'ireo sangany ambony. Averina indray, Moco Museum manova ny angovo habaka tokana mba hitsena ny rehetra. Na izany aza, lasa kely loatra i Amsterdam ka tsy afaka maneho ny nofinofisintsika rehetra, ary voafetra ny toerana fampirantianay. Betsaka kokoa ny zavakanto tianay hizara ary misy tantara maro hafa hotantaraina.